जीन सिक्वेन्सिङबाट कसरी पत्ता लगाइन्छ ओमिक्रोन भेरियन्ट? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
जीन सिक्वेन्सिङबाट कसरी पत्ता लगाइन्छ ओमिक्रोन भेरियन्ट?
कमला गुरुङ मंगलबार, मंसिर २१, २०७८, ०६:०६:००
काठमाडौं - कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पत्ता लगाउने विधि हो, जीन सिक्वेन्सिङ। भाइरसको जेनेटिक (आणुवांशिक) बनावटलाई डिकोट गर्ने परीक्षण नै जीन सिक्वेन्सिङ हो।
दोस्रो, ‘पीसीआरमा कोरोना पोजेटिभ र एस जीन नेगेटिभ आएको हुनुपर्दछ।’